ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လျှပ်စစ်မီးပြသနာကြောင့် သူမရဲ့ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတာကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွ ပြောပြလာတဲ့ ထိပ်ထားသခင်လေးရဲ့ ဗီဒီယို……. – Cele Oscar
ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လျှပ်စစ်မီးပြသနာကြောင့် သူမရဲ့ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတာကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွ ပြောပြလာတဲ့ ထိပ်ထားသခင်လေးရဲ့ ဗီဒီယို…….
March 15, 2022 By L YC Celebrity
ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးတဈခွမျးမှာ နရောတဈခု ကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျ ခဲ့တဲ့ ထိပျထားသခငျ ကတော့ အနုပညာလမျးကွောငျး မှာ လြှောကျလမျးလကျြရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ကလေးငယျလေး တဈယောကျဖွဈပွီး အောငျမွငျမှုတှေ ကို ဆှတျခူးထား နိုငျခဲ့တာ ပဲဖွဈပါတယျ။
ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှောလညျး ပါဝငျ သရုပျဆောငျခဲ့ပွီး ကွျောငွာတှကေို ရိုကျကူးလကျြ ရှိနတေဲ့ ထိပျထားလေး ကတော့ ပရိသတျတှခေဈြခငျရတဲ့ ကလေးငယျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူကွီးတဈယောကျ လို စကားတှကေို လညျး ဟာသနှောကာ ပွောတတျလို့ အားလုံးက အခဈြ ပို နရေတာပါ ။
ထိပျထားရဲ့ ခဈြစရာ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လညျး မမေကေ အမွဲဖျောပွပေးလေ့ ရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ ။ အခုလညျး ဒီကာလမှာ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ မီး အခကျအခဲနဲ့ ပတျသကျပွီး ဟာသလေးလုပျကာ ပွောပွလိုကျ တဲ့ ထိပျထားလေး ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုငျလေးကို ဖျောပွလာရာ အခါခါ ပွနျကွညျ့တိုငျး ရယျမော နရေတာကွောငျ့ ပရိသတျကွီး အတှကျပွနျ လညျ ဝမြှေလိုကျပါတယျ ။
crd Cele Zone
Photo – ထိပျထားသခငျ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းမှာ နေရာတစ်ခု ကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင် ခဲ့တဲ့ ထိပ်ထားသခင် ကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်း မှာ လျှောက်လမ်းလျက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်လေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ကို ဆွတ်ခူးထား နိုင်ခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးလျက် ရှိနေတဲ့ ထိပ်ထားလေး ကတော့ ပရိသတ်တွေချစ်ခင်ရတဲ့ ကလေးငယ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးတစ်ယောက် လို စကားတွေကို လည်း ဟာသနှောကာ ပြောတတ်လို့ အားလုံးက အချစ် ပို နေရတာပါ ။
ထိပ်ထားရဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လည်း မေမေက အမြဲဖော်ပြပေးလေ့ ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ အခုလည်း ဒီကာလမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မီး အခက်အခဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟာသလေးလုပ်ကာ ပြောပြလိုက် တဲ့ ထိပ်ထားလေး ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်လေးကို ဖော်ပြလာရာ အခါခါ ပြန်ကြည့်တိုင်း ရယ်မော နေရတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီး အတွက်ပြန် လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ။
Photo – ထိပ်ထားသခင်
”နငျက ပရိတျသတျ နဲ့ ရနျတိုကျရုံတငျမဟုတျ ကနျြခဲ့တဲ့သားအမိ ၃ယောကျကိုပါအဖမျးခံရအောငျလုပျတာနျောဒါလား ”ဆိုပွီး အောငျလကို ဒဲ့မေးလိုကျတဲ့ ရမှေနျရဲ့ညီမ……..
မျက်စိတွေမှားသွားလောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ “မကြေးစည်” ဇာတ်လမ်းတွဲမှ တောသူလေးမိုးဝါအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲတဲ့ ခွန်းနေကြည်ချို………